Maodely? | mandimby maharo
Posted on 3 July 2012 by Mandimby Maharo
Te hanome ohatra tsara ho an’ny taranaka any aloha any ny Fat. Ambeti-teniny io hatramin’izy mbola ilay mpitarika olona hidina andalambe tamin’ny taona 2009 ireny. Te ho maodely ho an’ny tanora amin’ny fitiava-tanindrazana, hoy izy, ka tsy hataotra enjika. Ho maodely amin’ny fampanjakana ny rariny. Ho maodely amin’ny fahaiza mitanatana ka apetraka ny politikan’ny fitstsiana ary ilaozana ny fiankinan-doha amin’ny famatsiam-bola avy any ivelany. Ary tamin’ilay kabary teny Iavoloha ramin’ny fankalazana ny fetim-pirenena farany teo dia te hanome ohatra amin’ny famahana olana izy ka tsy ho sakana amin’izay mety hahitana izay vahaolana amin’ny krizy eto amin’ny firenena.
Sao ary ilay atao hoe maodely sy ilay atao hoe fanao ohatra mihintsy no tsy azon’ireto mpitondra ireto? Satria mahagaga ihany raha ilay olona naniraka andian-jiolahy handrava sy handoro tanàna no sahy hilaza fa ho maodely. Vaka ihany ny saina raha ilay nivaotra ny tanindrazana amin’ny karana mba hananana hambo-po diso toerana no hilaza fa izy no ohatra. Aza gaga ary isika raha tsy matahotra ny handroba sy handrava ny dahalo satria nahazo ohatra fa ny fampiasana hery no ahazoana laza ka tsy hisy sahy hanohintohina. Tsy dia mahataitra ihany koa raha lasa fahazarandratsy ny midina an-dalam-be raha vao misy tombotsoa takiana. Tsy nahafoana ny fandrobana sy ny fitokonana tokoa mantsy ilay fanomezana ohatra noheverina ho tsara tany amboalohany.
Tsy nahasarika ny olona ny ohatra nomena satria tsy mifanaraka amin’ny teny atao ny asa vita. Ny vahoaka tokoa mety ho lalondalovana fa tsy jamba, ary izay mihatra amin’ny vatany no mora tadidiny fa tsy izay fampanantenana ho atao aminy. Ka na atao ihany ary ny hilaza fa hoe aleo aloha izy mba hanana fotoana anehoany fa tena maodely izy dia toa manahirana ihany. Manahirana satria toa maro loatra ireo fahadisoana atao, toa be dia be ireo azo tsikeraina ka ho sarotra koa ny ho moana manoloana izany.
Saingy indrisy fa na ireo izay nantenaina fa mba hitsikera aza toa lasa maodely hafa koa. Lasa maodely amin’ny miara misaosy ireo mpanohitra. Lasa maodely amin’ny fahaiza-mikabary sy amin’ny famoriana mpanao gazety mba anakonana ny tsy fahombiazana. Ireto maodely hafa ireto izay mihevitra ny hitondra fanjakana atsy ho atsy. Satria hono izy ireo maodely amin’ny fandefarana sy amin’ny fandalana ny filaminana dia aleony tsy miara manatrika ny fety tetsy Mahamasina fa tany Antsirabe no andeha na dia tsy nahazo naneho ny heriny aza. Satria maodely amin’ny fahaizana mitondra dia aleo mijanona ao anaty fanjakana ihany na dia tsy ahitam-bokatra firy afa-tsy lalàna tsy ho ampiharina oviana aza no asany ao amin’ny parlemanta.
Raha mihevitra ny ho maodely tokoa ireto mpitondra antsika ireto dia tsy hitarazoka toy izao ny famahana ny krizy. Toa lasa ho vava fotsiny ilay hoe famahana ny krizy samy Malagasy, fa ny hita aloha dia toa tsy ho maodely amin’ny fampihavanana ny Malagasy izy ireo. Raha ny kabary dia toa samy manana izany fahendrena izany izy ireo; fa raha ny atao kosa dia any an-kelika any ihany ilay kobay. Ka raha misy ny maodely omeny dia ny fisaraham-bazana sy ny fifankahalana no tena tadidin’ny taranaka . Ny ohatra nomen’izy ireo dia ny fahaizana manararaotra ny fahefana mba hanangonana harena tsy misy arakaraka. Izany no maodely hita amin’izao. Ka mba manontany tena ihany aho hoe sao dia tokony ny vahoaka ary ny anome maodely ho azy ireo, sao dia fotoana tokony anomezan-tsika ohatra ary izao ka hipetraka any amin’ny tantara any fa manana maodely amin’ny fampihavanana sy fahaizana mamaha olana ampilaminana isika? Sokafy ary ny sofintsika, airato ny maso ary andeha ho dradradradraina fa maharary ny vatatsika izao loza mihatra amin’ny firenena izao.
One thought on “Maodely?”
Pingback: #Ffkm: hiala nenina farany? | mandimby maharo